Relay relay, onye ode akwukwo na telivishọn akwụkwọ - peeji nke 2325 nke 3899
TELES RELAY 38983 posts 0 comments
“Ligue 1 mgbede” na Fraịdee 31 nke Jenụwarị 2020 - VIDI
TELES RELAY Feb 4, 2020 0
Gee ma ọ bụ gee ntị na mmemme "Soir de Ligue 1" na Fraịdee 31, 2020 na Éric Silvestro na Sylvain Charley. Na mmemme ahụ, egwuregwu mbụ nke ụbọchị iri abụọ na abụọ, Rennes-Nantes (22-3).…
N’afọ 2019, Cameroon kwụghachi ụgwọ ijeri 309 FCFA nke akwụrụ ụgwọ n’ahịa ...
(Itinye ego na Cameroon) - 309 ijeri FCFA. Nke a bụ envelopu nke steeti Cameroon nyefere, n'oge afọ 2019, na-akwụghachi ụgwọ nke ụgwọ zụrụ na…
Ndị egwuregwu bọọlụ Ronaldo na-anata ụgwọ mgbe ha gachara
Ndị egwuregwu South Korea abụọ gbara akwụkwọ na onye na-ahazi egwuregwu bọọlụ mgbe Cristiano Ronaldo mechara egwuregwu na enyi egwuregwu n'oge ndị njem Juventus na-aga Seoul n'afọ gara aga nwere ikike ịkwụ ụgwọ na…
IKWU EGO! PRINCE WILLIAM NA JOAQUIN PHOENIX GROVEL NA IHE BAFTA - VIDEO
Amaara m na ị na-arịa ọrịa nke ndị na-eme ememme nche abalị. Mụ onwe m kwa. Ma lee, anyị na - agbanyeghị - Prince Charles sonyeere ndị na-etolite n'ụra na Bafta Awards, na Joker n'onwe ya, Joaquin Phoenix nọ n'akụkụ a isonyere…
Ministrị nke ike na-ahụ maka mpaghara na-eto ngwa ngwa
(Ecofin Agency) - Tanzania nwere ugbua 280 MW nke ọkụ eletrik. Ike karịrị akarị a bụ nsonaazụ nke ọtụtụ ọrụ, gụnyere ike ọkụ ọkụ Kinyerezi I na nke II, Medard kwuru…
Mepụta ndepụta nzipu nwere Gmail - Ndụmọdụ
Ikwesiri izipu ozi ịntanetị na otu nke ndị nnata? Mpempe akwụkwọ nyocha na Gmail ga-eme ka ọrụ gị dị mfe. Izipu email na nnukwu ndị nnata nwere ike gosipụta ngwa ngwa…
Brad Pitt na-anọghị na BAFTA 2020: ezinụlọ a kpaliri ya ịhapụ inye…
Site na kewapụ ya na Angelina Jolie na 2016, Brad Pitt mekwara ka ọ hapụ ụmụ ya. Okachasịkwara nwa ya nwoke bụ Maddox, onye ya na ya sere okwu na ụgbọelu nzuzo obere oge tupu ịgba alụkwaghịm ya. Kemgbe ahụ, ha ...
India: Ihe ndetu Gandhi: Anantkumar Hegde na-eziga mmeghachi omume na njikwa BJP, gọrọ…
NEW DELHI: Onye otu BJP Anantkumar Hegde degaara ndị isi otu ahụ akwụkwọ ozi na o kwutaghị Mahatma Gandhi n'okwu ya, onye kwesiri ịche ihu fọdụl maka ịfụ Nna ya nke Mba, na nkwupụta ndị ahụ. ...
RTL Midi na February 04, 2020 - VIDIO
Akwụkwọ, nke "Mgbapụta" Mọnde, Febụwarị 3 kpughere, gosipụtara oke "ihe egwu asbestos" n'ụlọ ụlọ akwụkwọ. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ndị e wuru tupu 1997 ka nwere eriri ndị na-egbu egbu, ka akwụkwọ akụkọ na-akọ kwa ụbọchị.
Mmụta onwe onye bụ ihe a ma ama n'etiti ndị bi na Cameroon karịa South Africa…
(Azụmaahịa na Cameroon) - "Onu ogugu umuaka na aga akwukwo nke onwe ha sitere na erughi 5% na South Africa, Burundi na Mozambique, rue ihe kariri 30% na Cameroon,…
gara aga 1 ... 2 323 2 324 2 325 2 326 2 327 ... 3 899 esote